यो PUBG Mobile 0.13.0 | को लागि परिवर्तनहरूको पूर्ण सूची हो एन्ड्रोइडसिस
PUBG मोबाइल अद्यावधिक ०..0.13.0.० अब नयाँ डेथमेच मोड र अधिकको साथ उपलब्ध छ
मानुएल रामीरेज | | हाम्रो बारेमा, PUBG मोबाइल
Godzilla ०.G0.13.0.० अपडेटमा PUBG मोबाइलमा आउँदछ र त्यसले यससँग नयाँ उपन्यासहरू ल्याउँदछ जस्तै नयाँ डेथमेच मोड, धोखाधडीको राम्रो पहिचान र साना सुधारहरूको श्रृंखला जुन सामान्यतया सुधारिएको गेमिंग अनुभव थप्दछ।
Un PUBG मोबाइल अझै ठूलो आकारमा ती सबै अद्यावधिकहरूका लागि धन्यबाद जुन तपाईंले प्रत्येक एक वा दुई महिना प्राप्त गर्नुभयो र त्यो तिनीहरूले उसलाई ट्रिगरमा राखेका छन्। थोरै खेलाडीहरू छन् जससँग मोबाइल छैन र एक उच्च फेसनयुक्त लडाई रोयालको तनाव नक्शाको माध्यमबाट गएको छैन।
1 Godzilla नयाँ अपडेटमा एक थिमको रूपमा
2 ०.0.13.0.० अपडेटका लागि परिवर्तनहरूको पूर्ण सूची
2.1 अन्य सुधारहरू
Godzilla नयाँ अपडेटमा एक थिमको रूपमा
हामीसँग गोडजिला मुख्य विषयवस्तुको रूपमा छ भन्ने हो धेरै चाँडै हामी एक आश्चर्य हुनेछ त्यस महान् राक्षससँग सम्बन्धित जुन पानीबाट उठ्दछ र यसका साक्षीहरूको आँखामा डराउँदछ, त्यसैले यो समयको कुरा हो जुन हामीलाई थाहा छ।
अन्तिम 4v4 #TeamDeathmatch मोड PUBG MOBILE मा आयो! एक सदस्यको रूपमा गोदाममा स्क्वायर बन्द #TeamGodzilla or #टीम गिडोराह, र चाँडो र क्रोधित क्रियाकलापमा संलग्न हुन्छ पहिलो टोली kill० मार्नको लागि। तपाईंसँग के यो छ विजयी हुनको लागी लिन्छ? खेल अब! pic.twitter.com/pmD7iEHcMD
- सार्वजनिक मोबाइल (@PUBGMOBILE) जुन 12, 2019
यद्यपि सबैभन्दा उल्लेखनीय र महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आगमन हो टोली डिचेम्याचको नयाँ मोडको हाम्रा साथीहरूसँग लड्न र अतुलनीय रमाइलोको साथ मजा लिनको साथ। यो नयाँ मोडले हामीलाई 4X4 मा राख्दछ जुन इभोग्राउन्डमा थपिएको थियो र त्यसले हामीलाई पूर्ण शटहरूमा पूर्ण द्रुत खेलहरूमा राख्दछ र हामी दुबै पहिलो दृश्यमा र तेस्रो व्यक्तिको आनन्द लिन सक्छौं। निजीकरण ती दृश्यहरुमा उपस्थित हुनेछ, त्यसैले धैर्यता र मापन संग लिनुहोस्।
अर्कोतर्फ, र कम महत्त्वको साथ, हामीसँग छ नयाँ धोखा रोक्न प्रणाली smarts तल राख्न सिफ्ट यी नयाँ प्रणालीहरूले भर्चुअल अनुप्रयोगहरू, इमुलेटरहरू र ती परिमार्जनकर्ताहरूसँग गर्नुपर्नेछ।
०.0.13.0.० अपडेटका लागि परिवर्तनहरूको पूर्ण सूची
Atención पूरा सूची जुन धेरै व्यापक छ सबैभन्दा उल्लेखनीय परिवर्तनहरू बाहेक नयाँ संस्करण ०.0.13.0.० को भने:
टीम डेथमेच मोड ईभोग्राउन्डमा थपियो: यो नयाँ मोड दुबै दृष्टि र तेस्रोमा द्रुत खेलहरू द्वारा चित्रण गरिएको छ। अनुकूलन कोठा कार्डको साथ खेलाडीहरूले उनीहरूलाई पनि सिर्जना गर्न सक्षम हुनेछन्।
नियन्त्रण दृश्यहरू पहिलो दृश्यको लागि थपियो: अब बिभिन्न सेटि settingsहरू तेस्रो वा पहिलो व्यक्तिलाई लागू गर्न सकिन्छ।
यो भएको छ तेस्रो-पक्ष अनुप्रयोग रोकथाम प्रणाली अपडेट गरियो परिमार्जनकर्ताहरू, इमुलेटरहरू र भर्चुअल अनुप्रयोगहरू मार्फत धोखा वा धोका व्यवहार रोक्नको लागि।
एउटा प्रणाली थपियो जुन खेलको सर्वश्रेष्ठ खेलाडी वा अन्त्यमा MVP देखाउँदछ। सबै खेलाडीहरूले पूर्वनिर्धारित रूपमा एक MVP पोज प्राप्त गर्दछ। क्लासिक मोडमा शीर्ष तीन खेलाडीहरू वा विजेता TDM टीमको MVP फिचर हुनेछ।
Vikendi नक्शा मा, खेलाडीहरूले अब खुट्टा, छाप र चिन्ह छोड्नेछन् हिउँमा टायरहरूको।
A आरोहणका लागि समर्पित बटन जुन सेटिंग्समा सक्रिय गर्न सकिन्छ।
जब मैत्री आगो द्वारा हटाइन्छ, खेलाडीहरूले अब टिम सदस्य योग्यता गुमाउने कि नगर्ने भनेर निर्णय गर्न सक्दछन्।
Godzilla थिम थपियो। Godzilla थिम खेल लबीमा थिम घटनाहरू र अपडेट पछि पुरस्कारको साथ देखा पर्दछ।
यसले थप्छ लोकप्रियता र रैंकिंग को उपहार। प्रत्येक हप्ता, सूचीमा शीर्ष १०० खेलाडीहरूले "हालसालै लोकप्रियता" शीर्षक संकलन गर्नेछन्।
करिश्मा रैंकिंग थपियो। एक खेलाडी द्वारा संकलित स्थायी पोशाक र हतियार र वाहन फिनिशले आकर्षण बढाउनेछ।
विक्टोरियसियन सेना: नयाँ डेथमेच टीम मोडमा »डोमिनटिंग» को साथ १/1/१०/२०१० पूरा गर्नुहोस्।
अल्फा र ओमेगा - नयाँ टीम मोडमा तपाईंको पहिलो मार र अन्तिम शट प्राप्त गर्नुहोस्।
T-800: नयाँ टीम मोडमा एक पटकको लागि टर्मिनेटर पाउनुहोस्।
युद्धका दूत: नयाँ टीम मोडमा मिसनहरूको श्रृंखला पूरा गर्नुहोस्।
मा परिवर्तन "Darkest रात" मोड र "बिहान नहुञ्जेलसम्म जीवित रहनुहोस्":
अघिल्लो zombies छ4नयाँ प्रकारको zombies द्वारा प्रतिस्थापित गरिएको छ
तरल नाइट्रोजन ग्रेनेडहरू अब छोड्छन् हिउँदो धुँवाको बादल पछाडि विस्फोट पछि विस्तार अवधिको लागि सतह मा, क्षेत्र मा कुनै एकाइ धीमा।
लडाई मोडिफायरको नयाँ मोड थपियो।
केहि zombies अब नयाँ क्षमता छ: ट्याks्कले नजिकैका सहयोगीहरूलाई अधिकार प्रदान गर्दछ; स्किनरहरूले नजिकैका खेलाडीहरू सुस्त गर्न सक्छन्
एउटा नयाँ कारखानाले पुलिस स्टेशनलाई विस्थापित गर्यो।
खेलाडीहरूले अब ब्याचमा आईटमहरू संयोजन गर्न सक्दछन्।
सुसज्जित वस्तुहरू अब शीर्षमा प्रदर्शित हुन्छन्।
को नयाँ नक्कल वस्तुहरू अब देखि प्रदर्शित हुनेछैन रातो डट र "नयाँ" लेबल द्वारा।
हेलमेट र ब्याकप्याक ट्याबहरू अनुकूलन ट्याबमा सारिएको छ।
आर्केड मोड खुल्ने समय समायोजित गरिएको छ। को सोमबार र बुधवार स्निपर र युद्ध प्रशिक्षण छन्; मिनी जोन र द्रुत भागको लागि मंगलवार र बिहिवार; शुक्रबारदेखि आइतवार सबै मोडहरू उपलब्ध छन्।
संरक्षण वस्तुहरू अब २ 25% लामो समयसम्म चल्छन्। यसको प्रभावकारता उस्तै छ।
खेलाडीहरू अब बोल्ट-एक्शन राइफल पुन: लोड गर्न सक्नुहुन्छ जब तिनीहरू प्रक्रियाको सट्टामा सर्दछन् जबकि विस्तारित गरी लक्षित गर्दै।
सुधारिएको पहिलो व्यक्ति एनिमेसन जब एक SMG समाईरहेको बेला चलिरहेको छ।
सवारीसँग अब विस्फोटहरूमा राम्रो प्रतिक्रिया छ।
El घटना केन्द्र सुधारिएको छ.
टीम चुनौती योग्यता दौर विस्तार गरिएको छ:
अहिले Ranked स्थानमा मिलान प्रत्येक दिन खेलाइनेछ। प्रत्येक टीम प्रति दिन games खेलहरू सम्मिलित हुन सक्छ। प्रत्येक टोलीलाई कुल १ ranked रैंक गरिएको खेलमा भाग लिन अनुमति छ। र नयाँ आईटमहरू स्क्वाड शपमा थपिएको छ।
स्क्वाड चुनौतीको लागि दर्ता गर्ने खेलाडीहरूले खेल सुरु हुन १० मिनेट पहिले सूचना प्राप्त गर्नेछन्।
खेलाडीहरूले अब दैनिक खोजहरू, प्रगति खोजहरू, र उपलब्धि क्वेस्टहरू एकैचोटि सबै पुरस्कारहरू संकलन गर्न सक्दछन्।
New नयाँ गोत्र ब्याज थपियो स्तर for, स्तर and र स्तर १० को लागि।
मुख्य स्क्रीनमा एक विलम्बता सूचक थपिएको छ। हरियो, पहेंलो र रातो राम्रो वा नराम्रो कनेक्शन को प्रतिनिधित्व गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » हाम्रो बारेमा » PUBG मोबाइल अद्यावधिक ०..0.13.0.० अब नयाँ डेथमेच मोड र अधिकको साथ उपलब्ध छ